Huma tembiricha pfuti Manufacturers uye Suppliers - China Factory - Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co., Ltd.
Musha > Zvigadzirwa > Kuyera thermometer > Huma tembiricha pfuti
Dimensions (pakureba 665 makubhiti 380-urefu 610) (chikwata: mm): zvidimbu 100 / uremu 23KG
Inner pasuru saizi (kureba 175-makubhiti 128-urefu 60) (chikwata: mm): 1 chidimbu / uremu 230g
The huma tembiricha pfuti (michini lämpömittari) rakagadzirirwa kuyera womunhu muviri huma tembiricha bhuku. Zviri nyore chaizvo uye zvakakunakira kushandiswa. Iyo pahuma tembiricha yekupisa inokwanisa kuyera zvakaringana tembiricha mune yechipiri, pasina laser nzvimbo, dzivisa kukuvara kwemaziso, kushaiwa kubata ganda remunhu, kudzivirira kutapukirwa nehutachiona, imwe-pisa tembiricha yekuyera, uye tarisa furuwenza. Zvakakodzera vanoshandisa mhuri, hotels, mumaraibhurari, mabhizimisi makuru uye masangano, uye rinogona kushandiswa muzvipatara, zvikoro, tsika, dzendege uye dzimwe nzwisisika nzvimbo. The tembiricha pfuti kunogonawo inopiwa kuna vanachiremba dzokushandisa muzvipatara.
zita Chirungu pahuma tembiricha pfuti: The huma tembiricha pfuti
Pahuma pfuti vhoriyamu: benchmark dhizaini yekuyera kupisa kwehuma yemunhu
Huma pfuti dzinoshandiswa: muzvipatara, zvikoro, tsika, dzendege
Huma tembiricha pfuti kushandiswa
1. Kuyera kwekushisa kwemuviri wemunhu: kuyerwa kwakaringana kwekushisa kwemuviri wemunhu, kutsiva iyo yetsika yesercy thermometer. Vakadzi vanoda kuva mwana kunogona nguva dzose kushandisa michini lämpömittari (frontal tembiricha pfuti) kuongorora basal muviri tembiricha, rekodhi muviri tembiricha panguva ovulation, uye kusarudza nguva yakakodzera pamuviri, uye zvinogonawo uyere tembiricha kuti mutongi pamuviri uye saka pamusoro.
Ichokwadi, chinonyanya kukosha ndechokuti nguva dzose kuchengeta kana wako tembiricha muviri kanganisika, kudzivisa dzihwa utachiona, uye kudzivisa penguruve besa.
2. Kuyera kwekushisa kweganda: Kuyera tembiricha yekushisa kweganda remunhu, semuenzaniso, inogona kushandiswa kumiswa uye kubatwazve kwekuvhiya.
3. Chinangwa tembiricha kuyerwa: Kuyera tembiricha yekushisa kwechinhu, semuenzaniso, inogona kushandiswa kuyera tembiricha yekupisa kwemusoro wekapu kapu yetii.
4. Liquid tembiricha chipimo: kuyera tembiricha nemvura, dzakadai tembiricha mwana wacho kugeza nemvura, uye uyere mvura tembiricha apo mwana ari kutora kugeza, uye havachaoni kunetseka pamusoro pokuva chando kana kupisa; iwe unogona zvakare kuyera tembiricha yemvura yebhodhoro remukaka kuti ugadzire kugadzirira kweMucheka wemukaka wepfu;
5. Kupisa kwemakamuri kunogona kuyerwa:
â € »Precautions:
1. Tapota verenga mirayiridzo nokungwarira pamberi kuyerwa, uye huma zvinofanira kuchengetwa yakaoma, uye bvudzi haafaniri kufukidza pahuma, (tapota aite nokuyerwa iri hwaiitwa 10 â -40 â) kuitira iko kunyatso kuyerwa.
2. Iyo yekumusoro tembiricha inokurumidza kuyerwa neichi chigadzirwa ndeyekureva chete, uye haifanire kushandiswa sehwaro hwekutonga kwechiremba. Kana iwe ukawana tembiricha isina kujairika yemuviri, ndapota shandisa thermometer yekurapa kuti uwedzere kuyerwa.
3. Ndapota kuchengetedza vachifunga izvo uye kuchenesa nenguva. Kana iyo tembiricha yekupisa ichichinja zvakanyanya panguva yekushandurwa, mudziyo wekuyera unofanirwa kuiswa munharaunda kuti uyverwe kwemaminetsi makumi maviri, uye wozoshandiswa mushure mekunge wasimudzira kune yakajeka tembiricha yekuyera hwakawanda hukoshi.
Hot Tags: Huma tembiricha pfuti, Manufacturers, Suppliers, Wholesale, Factory, Buy, China, Made in China, Price, Price List, Quotation, CE, FDA